ဆော်ဒီအာေ၇ဗျ နိုင်ငံတွင် ဒုတ်ခရောက်နေသော်မြန်မာအလုပ်သမား၂၆ ယောက်အတွက်အကူညီလိုအပ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆော်ဒီအာေ၇ဗျ နိုင်ငံတွင် ဒုတ်ခရောက်နေသော်မြန်မာအလုပ်သမား၂၆ ယောက်အတွက်အကူညီလိုအပ်ခြင်း
ဆော်ဒီအာေ၇ဗျ နိုင်ငံတွင် ဒုတ်ခရောက်နေသော်မြန်မာအလုပ်သမား၂၆ ယောက်အတွက်အကူညီလိုအပ်ခြင်း
- nyinyi zaw
Posted by nyinyi zaw on Mar 24, 2012 in Copy/Paste |5comments
မြန်မာအလုးပ်သမား ( ၂၆) ယောက် ဆော်ဒီ အာရေဘီယ နိုင်ငံ သို့ မြန်မာအလုးပ်သမား agency ဖြစ်သော်job company ,golden arm company .အထွတ်အထိတ်နန်းတော် ကွန်ပဏိတို့ ၇ဲ့ လိမ်လည် စေလွတ်မှုဖြင့် (၁၇.၁၂.၂၀၁၀) ရက်တွင် ရောက်ရှီခဲ့ပါတယ် ရောက်ရှိပီး ၃ လ ကြာမှ စတင်
ပီးအလုပ်စပေးပါတယ် အလုပ်မရခင် အချိန်တွင် ကွန်ပဏီမှ စားစရိတ်မပေးပဲ ရခိုငပြည်နယ် မောင်တော် မြို့နယ် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ် မှမြန်မာများဆီမှ လိုက်လံပီးတောင်းရမ်းစားသောက်ခဲ့ရပါတယ် အလုပ်စပေးတဲ့အခါ တွင်လဲ မြန်မာ အေဂျင်စီ တွေပြောတဲ့လစာနဲ့ ယခုပေးတဲ့လစာ အ၇မ်းကို ကွာခြားနေပါတယ် မလုပ်နိုင်လို့ပြောတော့အခါ ကွန်ပဏီမှ တာဝန်၇ှိသူကမြန်မာအလုပ်သမား (၂၆ )ယောက် ၇ဲ့ခေါင်းဆောင်များကို ရဲနဲ့ ဖမ်းဆီးကာ ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ အလုးပ်သမား (၂၆ )ယောက်ကိုလဲ အဆောင်မှ နှင်ထုတ်ကာ ပါ့စ်ပို့စ် နဲ့နေထိုင်ခွင့် ကဒ်ကိုသိမ်းယူထားလိုက်ပါတယ် ဒါ့အပြင် ကွန်ပဏီ ပိုင်၇ှင် က မင်းတို့ သံ၇ုံမပြောနဲ့ အစိုးကိုလဲ လုံးဝဂ၇ုမစိုက် ကြိုက်တဲ့ လမ်းက ပြန်လို့ ပြောပါတယ်ပါ့စ်ပို့ နဲ့ နေထိုင်ခွင့် ကဒ်မ၇ှီသဖြင့် စားစ၇ာ နေစ၇ာ သွားေ၇းလာေ၇း အခက်ခဲမျိုးမျိုး အကြပ်တည်းအမျီုးမျိုး ဖြင့် ကြူံတွေ့ ၇င်ဆိုင်နေ၇ပါတယ်ယခုဆို၇င်၁ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါပီ အထူးသဖြင့် ဘာသာေ၇း ဘာသာစကားအခက်ခဲ မှာ အဒိက ဒုတ်ခေ၇ာက်နေပါတယ် တစ်ချို့ မြန်ာမာအလုပ့်သများမှာ အ၇ိုက်ခံနေကြတယမြန်မာ ၂၆ ယောကသည်အမိမြန်မာ သ်အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ရန် ဆော်ဒီအာေ၇ဘိယနိုင်ငံ ryidah မြို့ရှိမြန်မာ သံ၇ုံးအားဖုန်း fax ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်စာများပို့ခါ အကူညိတောင်ခံခဲ့ပါတယ် ဒါအပြင် မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်၇ာ ငှာနအသီးသီး နှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးငှာန အားစာပို့ပီးအကူအညီတောင်းခံပါတယ် အလုပ်သမားဝန်ကြီးငှာန ကလဲ အကူညီပေးနေသည်လို့ ကြားသိ၇ပါတယ် ဒါမဲ့ မြန်မာ ၂၆ ယောက် သည်ဆော်ဒီအာေ၇ဘီယ နိုင်ငံတွင် စားစ၇ာ နေစ၇ာအလုပ်လက်မဲ့ ဘာသာေ၇းခွဲခြား မျုဘာသာစကားခက်ခဲ နှင် နေထိုင်ခွင့် card စသည့်အမျိုးမျီုး ခက်ခဲတေါ့တယ်အခါ ၁၇က်ထက်၁ ၇က် ပိုပီးဆိုးဝါးနေပါတယ် ဒါကြောင့် မြန်မာ၂၆ ယောက် သည် အမိမြန်မာ သို့အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ရန် အကူအညီများ နည်းလမ်းများအားစောင့်မျှော်နေပါါတယ်’
About nyinyi zaw
nyinyi zaw has written2post in this Website..
View all posts by nyinyi zaw →
အဲဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံခြား ကိုမသွားဖို့ ပြောနေကြတာဖြစ်မှာပါ. . .
အမြန်ဆုံး အကူအညီ ရကြပါစေ
အရှေ့အလည်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးထောက်ပြီး မတို့မထိရဲကြတာများတယ်။
ထိုင်းမှာဆိုရင် အနိုင်ကျင့်ခံရရင် အကူအညီပေးဘို့ ဖေါ်ထုတ်အရေးယူဘို့လွယ်ပေမယ့်
မြန်မာပြည်ထဲ.. လူမျိုးခွဲခြားတာတွေ.. ကြားရသိရတိုင်း… နိုင်ငံရပ်ခြားအသက်စွန့်လုပ်နေရတဲ့.. မြန်မာသန်းဂဏန်းကြီးအတွက်.. စိတ်ပူမိတာ.
အစိုးရရေ.. သံရုံးကနေတဆင့်.. လုပ်ပေးပါဗျို့..။
ကူဝိတ်မှာလဲ အလားတူပြဿနာ မျိုး ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မြန်မာ ၂၀၀ ကျော် ကိုလက်သမား သံချည်သံကွေး ဆိုခေါ်လာပြီး
က`န္တာ ၇ထဲမှာ မြေကျင်း ကြီးတွေ တူးခိုင်းနေတာပါ။တချို့နေရာတွေဆို မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ဗုံးဆံတွေ တောင်တွေ့ ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီ အ လုပ်တွေ ကို အ ရင်တုန်း ဘင်္ဂလားတွေလုပ်ကြတာပါ.ခုကူဝိတ်အစိုးရကဘင်္ဂလားတွေကို visaမပေးတော့ မြန်မာတွေ ကိုမြန်မာ အေးဂျင့်နဲ့ပေါင်းပြီးခေါ်လာတာပါ.တော်တော်လေး ကို ဒုက္ခေ၇ာက်ပါတယ်။တချို့ ကလေးတွေဆို နိုင်ငံခြား ဆိုပြီး လိုက်လာတာ ဘာ မှနား မလည်ကြဘူး.ရာသီဥတုအ ခြေအနေ တော်တော်လေး ကိုဆိုးတဲ့နိုင်ငံတွေပါ.ဟိုမှာ ပြောတဲ့ လစာ လည်း မရတဲ့ အ ပြင် အလုပ်မဆင်းနိုင်တဲ့နေ့တွေ ဆိုထမင်းတောင် အ ငတ်ထား တယ်ဆိုပဲ.သံ ရုံး ကတော့ သွား ကြည့် ပြီး မြန်မာ အ လုပ်သမား ၀န်ကြီး ဌာနကို စာတင်ပေး မယ်လို့ တော့ လာ ပြော တယ် လို့သိရတယ်။ တချို့ ဆို အ ရမ်း ပြန်ချင်နေကြပြီ.
မြန်မာသံရုံးတွေ ဆီမှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ (တရားဝင်တာရော၊ တရားမ၀င်တာတွေအားလုံး) ရဲ့ အထူးသဖြင့် နာမှုကိစ္စတွေမှာ ၀င်အရေးယူဆောင်ရွက်ကြဘို့ ညွှန်ကြားချက်ကို သံရုံးတိုင်းကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှာ လက်နှေးလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာအစိုးရရုံးပြင်ကန္နားများရဲ့အားနဲချက်ကြောင့်များကြောင့်ဘဲလား…….